Ny orinasan'ny famantaranandro Suisse Swatch dia maniry ny rafitra fiasany manokana ho an'ny smartwatches | Vaovao momba ny gadget
Taorian'ny fanambarana ny Apple Watch, maro ny mpanamboatra niantsoantso, nilaza fa te-hamono ireo mpanao famantaranandro nentim-paharazana i Apple. Ny tale jeneralin'ity orinasa ity dia nandritra ny volana maro dia nitaraina momba ny fitsabahana nataon'i Apple tamin'ny fidirana tanteraka tao amin'ny tsena iray izay niantraika mivantana tamin'izy ireo, toy ny hoe izy no voalohany nandefa smarwatch. Volana maromaro taty aoriana dia nanomboka niely ny resaka fa mety hiasa amin'ny smartwatch i Swatch ataovy feno eo amin'ny tontolon'ny akanjo azo asiana ny lohanao, saingy kely sisa no heverina, farafaharatsiny mandraka ankehitriny.
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny orinasa sy ny entina entina dia manondro fa i Swatch dia mety hiasa amin'ny rafitra fiasany manokana, lasa safidy hanoloana ny watchOS an'ny Samsung, Android Wear ary Tizen, hevitra iray izay raha jerena voalohany dia toa tsy dia voahaja firy fa arakaraka ny habetsahan'ny tompon'andraikitra satria ny orinasa dia hanana fanamarinana izay tsy fantatsika anio. Mpanamboatra fiambenana Soisa hafa toy ny TAG Heuer, miloka amin'ny Android Wear herintaona mahery kely lasa izay ary efa nandefa modely roa eny an-tsena izy ireo, ny farany natolotra andro vitsivitsy lasa izay ary amin'izao fotoana izao dia toa nahavita tsara izy ireo. Fossil, mpanao famantaranandro iray hafa koa dia miloka amin'ny Android Wear.
Na izany aza, Samsung mampiasa ny rafitra fiasany manokana, Tizen, rafitra miasa izay mampiseho fanjifana sy fahombiazana tsara lavitra noho izay hitantsika amin'ny fitaovana tantanan'ny Android Wear. Angamba ny hevitr'i Swatch dia ny manao fitaovana namboarina ho an'ny lozisialy, toa ny Apple sy Samsung., hevitra iray mety handoavana vola be anao nefa tsy hahomby amin'ny tsena amin'ny farany. Tokony hitsahatra amin'ny fanandramana ny orinasa Soisa ary hiditra amin'ny tsena amin'ny Android Wear na Tizen, ary arakaraka ny fandehan'ny fotoana ary arakaraka ny fofonainy, manomboka ny fitiliana amin'ny rafitra fiasa misy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » SmartWatch » Ny orinasan'ny fiambenana Soisa Swatch dia maniry ny rafitra fiasan'izy ireo manokana ho an'ny smartwatches